Esi rụọ ọrụ okpukpu abụọ na ogwe ohere iji tinye isi | Esi m mac
Etu esi pịa okpukpu abụọ ka ịgbakwunye otu isi
Ọtụtụ n'ime anyị enweghị Mac n'ụlọ naanị ebe anyị na-amalitekarị na ngwaọrụ iOS, ọ bụrụ iPhone, iPod wee wulite ezinụlọ dị iche iche ngwaọrụ nke ika ahụ ruo mgbe anyị ruru Macs. Oge a anyị agaghị edozi na Apple idevice dị iche iche iji rụọ ọrụ a nke na-abịa site na sistemụ arụmọrụ iOS ya iji nọrọ na macOS Sierra ọhụrụ. Taa, anyị ga-ahụ esi okpukpu abụọ enweta na ohere mmanya ịgbakwunye a mgbe na ederede anyi.
Ntinye a dị mfe ma ọ chọghị ọtụtụ usoro iji mezuo, o doro anya na ọ bụ ihe agbanyụrụ site na mbido mgbe anyị wụnye sistemụ arụmọrụ ọhụrụ macOS Sierra 10.12, yabụ taa anyị ga-egosi usoro ị ga - agbaso iji mee ka nhọrọ a rụọ ọrụ. Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịbanye Mmasị sistemụ, ozugbo n'ime anyị ga-enweta Igwefoonu ma n'ime Ederede ederede. Nke a bụ ebe anyị hụrụ nhọrọ na njedebe nke nhọrọ atọ dịnụ ebe ọ na-ekwu, sị: «Tinye isi ma soro site na ịpị oghere abụọ» Anyị na-akara igbe ahụ na ọ bụ ya.
Ugbu a oge ọ bụla anyị pịa ugboro abụọ n'usoro na ogwe ohere, otu isi ga-apụta na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na anyị chọrọ deactivate a họrọ nhọrọ, ihe anyị ga-eme bụ uncheck a igbe na ihe niile ga-adị ka ọ dị na mmalite. Nke a na nhọrọ dị na iOS ruo ogologo oge na abịala na Macs na ụdị ọhụrụ a nke macOS Sierra operating system.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Nkuzi » Etu esi pịa okpukpu abụọ ka ịgbakwunye otu isi
Apple TV 3 na-enwetakwa mmelite sistemụ
Mee ọsọ, ndị AirPod dị ugbu a maka ịzụta!